Abahlinzeki beKhebuli ye-Solar PV kanye neFektri - Abakhiqizi bekhebula leSolar PV China
I-DC Cable 1500V H1Z2Z2-K Solar Panel izintambo i-6mm2 isetshenziswa kugesi wamandla we-Photovoltaic ukuxhuma iphaneli yelanga kanye ne-Solar Inverter noma ibhokisi lokuhlanganisa le-Solar.Iyamelana ne-UV futhi ingasebenza ngaphandle emazingeni okushisa ukusuka ku-40 ℃ kuya ku-120 ℃ nge 25years impilo yokusebenza.
I-TUV 2PfG 1169 I-Pure Copper Solar PV Cable 6mm 1000V izakhi ezikhethekile ezisetshenziselwa ukuxhuma iphaneli yelanga kanye ne-Inverter noma ibhokisi lokulawula ohlelweni lwamandla we-Solar.I-ukumelana kwe-UV futhi kungenzeka ukuthi isebenze ngaphandle ezindaweni ezibucayi, i-Ozone, iHydrolysis imelana nama-25years.
I-DC 1500V 2core Solar Cable 2x4mm 2x6mm, ebizwa futhi ngokuthi yi-Solar Energy cable - Ikhebuli le-Solar Panel - Ikhebula le-Photovoltaic, ikhebula le-PV lisetshenziselwa ukuxhumanisa ukuhlelwa kwepaneli yelanga ukuze inverter noma ibhokisi lokuhlanganisa elanga. Zilungele ukufakwa kwangaphakathi nangaphandle futhi zixhuma amangqamuzana elanga kuye ku-inverter noma ikhebula lama-DC mains.
I-UVV ye-PV wire tight ye-Solar Cable Tie isetshenziselwa ukuphathwa kocingo lwelanga, izinto ezisetshenziswayo zinezintambo ezingama-304 ezingenazintambo zensimbi kanye ne-Nylon plastic cable.Ingasiza ukulungisa ikhebuli yelanga kahle kupaneli yelanga, ukuze kuvikelwe ikhebuli yelanga ukuthi yehle phansi kanye nomonakalo.